” သာတူညီမျှ “ – Grab Love Story
Revlon နုတ်ခမ်းနီ ရဲရဲလေးအား အပီး သတ် ဆိုးပြီး နောက် မှန်တင်ခုံပေါ် ပြန်ချလိုက်သည် ။ ခပ်ထူထူ နုတ်ခမ်းလေးမှာ နုတ်ခမ်းနီရဲရဲ လေး နှင့် လိုက်ဖက်လွန်းသည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်မိသည် ။
ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်း မျက်နှာလေး နှင့် ထူထူ ထဲထဲ နုတ်ခမ်းလေး မှာ အနီရဲရဲ လေး ဖြင့်လိုက်ဖက်လွန်းနေသည် ။ ဖြူစွတ်ဝင်းပ နေတဲ့ အသားအရည်ကြောင့်လည်း နုတ်ခမ်းသား မှာ ပိုမို ပေါ်လွင်နေသည် ။
မှန်ထဲမှ မိမိ မျက်နှာအား ကျေနပ်စွာ ကြည့်လိုက်ရင်း တစ်ချက် ပြုံးလိုက်သည် ။ အိုမီဂါ ပုံစံ ဆံပင် သား တို့အား လက်ဖြင့် တစ်ချက်သပ်ချလိုက်ပီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည် ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပတ်ထားသော မွေးပွ တဘက် အဖြူရောင်ကြီးက ဖြေချလိုက်ကာ ကုတင်ပေါ် သို့ ပစ်တင်လိုက်သည် ။
တင်းပြည့်စွံ့ကားနေသော ရင်သား တို့ ကို လက်ဖြင့် တစ်ချက် ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်သည် ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေမှာ မညိုမနီ လေးဖြင့် ချွန်ထွက်နေသည် ။ ရင်သားအောက်မှ ဘိုက်သား တို့မှာ အနည်းငယ် စူထွက်ချင်သယောင် ဖြစ်နေပေမယ့် နေ့စဉ်ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ထားသဖြင့် သိပ်မသိသာလှပေ ။
ချက်အောက် ရှိ ဆီးခုံ နေရာတွင် ပေါက်ကာစ အမွှေး လေးတွေ မှာ ရေးတေးတေး ။ တစ်ပတ် တစ်ခါ ရိတ် တတ် သော အကျင့် ရှိသဖြင့် သူမရဲ့ ယောနိ တစ်ဝိုက်မှာ ရှင်းလင်းနေလေသည် ။ ပေါင်တံ နှစ်ခု အား ပူးကပ်ထားသဖြင့် တြိဂံ ပုံစံလေး ဖြစ်နေသည် ။ မှန်ထဲတွင် ဘေးတစ်စောင်း လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။
ကျစ်လစ်လုံးဝန်းဖြူဖွေးသော တင်သားစိုင်တို့မှာ တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိနေသေးသည် ။ သူမကိုယ် သူမ သဘောကျစွာ ပြုံးမိလိုက်သည် ။ ဖွံ့ထွားတဲ့ တင်ပါးဆုံကြောင့် ခါးမှာ သေးသိမ်နေသလို ရှိလှသည် ။ မိန်းမ တွေ ထဲတွင် အရပ်မြင့်သည်ဟု ပြောရလောက်အောင် သူမ အရပ်က ငါးပေငါးရှိနေသည် ။
ပေါင်ချိန် ၁၂၅ ကျော်ကျော်မှာ သူမ ကို ၀ သည်လို့ မဆိုနိုင်ပေ ။ ပေါင်တံတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နှင့် တင်ပါး လုံးလုံး ၀န်းဝန်းတွေက သူမ အလှ ကို ပေါ်လွင်နေစေသည် ။ မှန်ထဲ တွင် မိမိ ကိုယ်လုံးကို သေချာ ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေပီးနောက် အ၀တ်ဗီဒိုကို ဖွင့်လိုက်ကာ အနီရောင် ရဲရဲ ဘော်လီနှင့် အောက်ခံ ဘောင်းဘီ တစ်စုံ ထုတ်ဝတ်လိုက်သည် ။
လုံးဝန်းသော ရင်သားများကို အနီရောင်ဘော်လီလေးမှ မနိုင့်တနိုင် ထမ်းထားသယောင် ။ ဖြူစင်ဝင်းပ သော အသားအရည်နှင့်လိုက်ဖက်လွန်းလှသော အတွင်းခံ ပင်တီလေးမှာလည်း စွံ့ထွားသော တင်းပါးဆုံတို့အား ထိန်းမတ်ထားပေသည် ။
မှန်တင်ခုံ ထိုင်ခုံပေါ်သို့ ခြေထောက် တစ်ချောင်းလှမ်းတင်လိုက်ရင်း နာမည်ကြီးတံဆိပ် လိုးရှင်းဘူးအား ခြေဖျားမှ ပေါင်ရင်းထို ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်သပ်လိမ်းကျံလိုက်သည် ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မွှေးကြိုင်သွားသည် အထိ လိမ်းကျံလိုက်လေသည် ။
ထို့နောက် ဂါဝန်တစ်ထည် ထုတ်ကာ ၀တ်ရန်လုပ်ပီးမှ စဉ်းစားကာ မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်စုံ ခရမ်းရင့်ရောင်လေး ထုတ်ကာ ၀တ်ဆင်လိုက်ပီး မှန်ထဲရှိ မိမိ ကိုယ်လုံးအား သေချာ ပြန်ကြည့်လိုက်သည် ။ ကျက်သရေရှိလှသည် လှပလွန်းလှသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိလှသည်ဟု မိမိကိုယ်ကို မှတ်ချက်ပြုလိုက်သည် ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ထုတ် ရေမွှေးအဆီပုလင်းလေးအား လက်ကောက်ဝတ်တွင် သုတ်လိမ်းလိုက်ပီး လက်ကောက်ဝတ် နှစ်ဘက်ဖြင့် လည်တိုင်ကျော့ကျော့နေရာအား ပွတ်သပ်လိုက်သည် ။ ပြီးပြည့်စုံ သွားသည်ဟု ထင်မိသည် ။
အသက် ၂၉နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သည့် အလှ ယခုခေတ် မော်ဒယ်လ် တွေလို ပိန်ပိန်ပါးပါး မဟုတ် ။ တင်းတင်းပြည့်ပြည့် ရှိလှသည့် အလှပိုင်ရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း မြင်မိသူများက မှတ်ချက်ချ ပေလိမ့်မည် ။ ဘိုနီယာ လက်ကိုင်အိတ်ကလေးကို ယူကာ အခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာခဲ့လေသည် ။
အောက်ထပ် ဧည့်ခန်း ထဲ အရောက် မျက်လုံး ဝေ့ဝိုက်ကြည့်လိုက်ပီ “ထွေးထွေး နဲ့ သီတာ ဘယ်ရောက်နေလဲ “ “ဟုတ်ကဲ့ လာပါပီ မမ နောက်ဖေးမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေလို့ပါ “ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော် ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ရောက်လာသည် ။
နှစ်ယောက်စလုံး ဖြူဖြူချောချောလေးတွေ ချည်း “ငါ ဒီနေ့ အလုပ်ကိစ္စ ရှိတယ် နဲနဲ နောက်ကျမယ် နင့်အကို ပြန်လာရင် ပြောလိုက်ဦး အလုပ်ကိစ္စ အရေးကြီးလို့ သွားတယ်လို့နောက်ကျမယ်လို့ ကြားလား “ “ဟုတ်ကဲ့ မမ “ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ဆယ်နာရီ ထိုးတော့မည် ဖိနပ်စင်မှ အနက်ရောင် လေဒီရှူးလေး ကို ထွေးထွေး ဆိုသည့် ကောင်မလေးမှ ယူပေးသည် ။ လေဒီရှူးလေးအား ၀တ်ဆင်ပီး အဖြူရောင်ဘယ်ရီယာ ကားကြီးပေါ် တက်ကာ မောင်းထွက်သွားလိုက်လေသည် ။
မနက် ၇ နာရီ …..
အိပ်ယာကနိုးပီး အောက်ထပ်ဆင်းလာတော့ မိန်းမဖြစ်သူ မိုးသန္တာက ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေးနဲ့ ခြင်းတောင်းလေး ဆွဲပီး ကျောင်းသွားရန် အပေါက်ဝတွင်ရောက်နေပီ “မိုး သွားပီ ကို မနက်စာပြင်ခဲ့တယ်နော် “ “စောလှချည်လား မိုးရဲ့ “ “အင်း ဒီနေ့ မိုး အလုပ်ရှိလို့ ကျောင်းက စောစော လှမ်းခေါ်လို့မောင် သွားပီ တာ့တာ “ တံခါးဝမှ လှမ်းနုတ်ဆက်သော မိန်းမ ကို ပြုံးပြလိုက်ပီး မနက်စာ စားလိုက်သည် ။
ဒီနေ့ အလုပ်မရှိသည်မို့ ဧည့်ခန်းမှာ သတင်းစာ ထိုင်ဖတ်နေလိုက်သေးသည် ။ ကိုးနာရီ ခွဲလောက်မှာတော့ စားပွဲပေါ်တင်ထားသော ဖုန်းမှ မက်ဆေ့ဝင်လာသည်မို့ ဖွင့်ဖတ်လိုက်တော့ ပျော်သွားသည် ။ ရေမိုးချိုးအ၀တ်အစားလဲလိုက်သည် ။
စတစ်ကော်လာ အဖြူရောင်နှင့် ပုဆိုး နီညိုရောင် လေးအား သေခြာ ပြင်ဆင်ဝတ်လိုက်ပီးနောက် ဟွန်ဒါဖစ် ကားလေးကား မောင်းကာ ထွက်လာလိုက်လေသည် ။ မြို့အစွန်ရှိ ခြံဝန်းလေးအတွင်း ၀င်းနိုင် ကားမောင်းဝင်လာလိုက်သည် ။
လှပခန့်ညားတဲက နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးရဲ့ ပေါ်တီခုံအောက်တွင် ဟယ်ရီယာ ကားအဖြူရောင်လေး ရပ်ထားတာ တွေ့လိုက်သည်မို့ မီမီသိမ့် ရောက်နေပီဆိုတာ သိလိုက်သည် ။ ကား ကို ရပ်ကာ ဆင်းလာပီး ပုဆိုးအား သပ်ရပ်စွာ ပြင်ဝတ်လိုက်သည် ။
ထို့နောက် လူခေါ်ဘဲလ် အား နှိပ်ရန် လက်လှမ်းမည်အပြု အိမ်တံခါးမ ကြီး ပွင့်လာသည်မို့ အိမ်ထဲ သို့လှမ်းဝင်လာလိုက်သည် ။ အပြုံးလေး နှင့် လှပစွာ ဆီးကြိုနေသော မီမီသိမ့်ကို တွေ့လိုက်ရသည် “ချစ် ရောက်နေတာ ကြာပီလား မောင် နဲနဲ နောက်ကျသွားတယ် “
“မနောက်ကျပါဘူးမောင်ရဲ့ ချစ်လည်း အခုပဲရောက်တာ “ တခါးပြန်ပိတ်နေသော ၀င်းနိုင် အား နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်သည် ။
တံခါး ပိတ်ပီး သည်နှင့် မီမီသိမ့် ဘက်သို့ လှည့်ကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထွေးပွေ့လိုက်သည် ။ “လွမ်းလိုက်တာမောင်ရယ် မတွေ့ရတဲ့ ရက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ကြာသွားပီလဲကွာ “ “မောင်လည်း အတူတူ ပဲ လွမ်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မောင်တို့တွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဟုတ်ကြတော့ အခြေအနေ ပေးမှ တွေ့လို့ရတာလေ “
အင်း ပါ သိပါတယ် မောင်ရဲ့ မောင့် ကို လွမ်းလို့ လွမ်းကြောင်း ပြောတာပါနော် မတွေ့ ဖြစ်လို့ အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး အခြေအနေတွေကို ချစ်သဘော ပေါက်ပါတယ် ချစ်လည်း ဒီနေ့ ချစ် အမျိုးသားက အစောကြီး အလုပ်ရှိလို့ ထွက်သွားတော့ ချစ်အတွက် အချိန်ရတာမို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာ“ “အင်း ချစ်အမျိုးသားက ချစ်ကို တော့ ချစ်တယ်မလား သူနဲ့ တခါနှစ်ခါ ဆုံဖူးပေမယ့် သူက ချစ်တတ်မယ့်ပုံပေါ်ပါတယ် “
အင်း သူက ချစ်ကို ချစ်ပါတယ် မောင့်လောက်တော့ ချစ်မယ်မထင်ဘူး ဟုတ်တယ်မလား “ “ဟင်းး..ဟင်းးး ဒါပေါ့ဗျာ “ “ချစ်လည်း မောင့် ကို သူ့ ထက် ပိုချစ်ပါတယ်နော် ဟွမ်းးးး“ “အင်း သိပါတယ်ချစ်ရယ် ….ချစ် ဒီနေ့ အရမ်းလှနေတာပဲကွာ “ “အင်း… ဒီနေ့ မောင့် အကြိုက် ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ၀တ်လာတယ်လေ မောင့်ကို လွမ်းလို့“ “အင်း ၀င်လာကတည်း က ချစ်က မောင်ကြိုက်တဲ့ မြန်မာ ဆန်ဆန် လေး နဲ့ မြင်လိုက်ရလို့ အရမ်း ရင်ခုန်သွားတာပဲ “
မောင့်အကြိုက် ၀တ်လာတာက အပေါ်ယံတင်ပဲလား “ “ဟင်းးးး အနီရောင် ၀မ်းဆက်လေး လည်း ၀တ်လာပါသတဲ့ ရှင် …ဟင်းးးဟင်းးး“ “အားးးး ရင်တွေ ပိုခုန်လာပီကွာ … “ “ ဟင်းဟင်းးးး ဒီထက်ရင်ခုန်စရာတွေ မပေးသေးဘူးလား မောင် “ ၀င်းနိုင် ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်ပီး မီမီသိမ့် ကိုယ်လုံးလေးအား စွေ့ခနဲ့ ကောက်ချီလိုက်သည်။
ဒီနေ့ တစ်နေကုန် ချစ်ကို ရင်ခုန်သံ အပြင်းစားတွေ ပေးမှာ စိတ်ချ “ “အ .. မောင် ..ပြုတ်ကျဦးမယ် “ “ကိုယ့်အချစ်ဆုံး ခန္ဓာကိုယ်လောက်တော့ အေးဆေးပါ ဟင်းဟင်း “ “ဟင်းးးးဟင်းးးး ချစ်လိုက်တာ မောင်ရယ် ….“ “နူတ်ခမ်းနီအရဲလေး က အသည်းယားတယ်နော် “ မီမီသိမ့်ကို ပွေ့ချီကာ အပေါ်ထပ်လှေကား ကို တက်မည်အပြု “မောင် … အောက်ထပ် ထမင်းစားခန့်ရှေ့ အခန်းကိုသွား အပေါ်ထပ်က သူ နဲ့ ချစ်နေတဲ့ အခန်း ဖြစ်နေတယ် ဒီအိမ်က သူနဲ့ ချစ် အလုပ်အားရင် အေးအေးဆေးဆေး လာနားတဲ့နေရာ “ “အော် … “၀င်းနိုင် ရင်ဘက်မှာ ပါးလေးအပ်ရင်း လည်ပင်းလေးအား မီမီသိမ့် တွဲခိုထားလိုက်သည် ။
တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းကာ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးရှိရာ အိမ်အောက်ထပ်ရှိ ထမင်းစားခန်းဘေးမှ အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ရယ်သံ အူမြူးနေသံလေး ဖြင့် ထွက်သွားလေတော့သည် ။
အမှောင်သည် သူတို့အတွက်အလင်း ဆိတ်ငြိမ်ရာသည်သာ သူတို့အတွက် ပျော်မြူးရာနေရာ ပိုင်ဆိုင်မှု မဟုတ်သည်ကိုသာ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ချင်မိကြသည် အတိတ်တွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သော အနာဂါတ်အား ပြန်လည်တူးဆွနေမိကြသည် စည်း တစ်ဘက်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော ရင်ခုန်သံတို့သည်ကား အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာကြလေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ( ၂ ) ပတ်ခန့်
စူပါ မတ်ကက် ကြီးတစ်ခုရှိ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ကော်ဖီဆိုင် အခန်းငယ်လေးအတွင်း အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ။ သုံးယောက်လုံးက အသက် သုံးဆယ်ဝန်းကျင်တွေ။ “မိုး…ဒါ ကိုယ် ပြောပြောနေတဲ့ ကိုယ့် ကျောင်းနေဖက် ငယ်သူငယ်ချင်း မီမီသိမ့်ဆိဖတာလေ Best One ကော်စမစ်တစ် ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်လေ … သူ့ အမျိုးသားကတော့ *** ဌာန ဦးစီးမှူးလေ “ “ဟုတ်ကဲ့ မမီမီသိမ့် မိုးကိုလည်း ကို့ သူငယ်ချင်းလို ခင်ပါနော် “
“၀င်းနိုင်က မီ နဲ့ တွေ့ တိုင်း သူ့ မိန်းမ ကို ချီးကျူးနေတာ အခု အပြင်မှာမြင်ရတော့မှပဲ တကယ်ယုံသွားတယ် “ “ဟင် ကိုက ဘာတွေ ပြောလို့လဲ “ “အော် သူ့မိန်းမ ဘယ်လောက်လှကြောင်း ဘယ်လောက်ချောကြောင်းပေါ့ အမြဲချီးမွမ်း နတာလေ “ “အာ… မမီမီသိမ့် ကမှ မိုးထက် ပိုချောတာပါနော် ဟင်းဟင်းးးး“ မိုးသန္တာ တစ်ယောက် သဘောကျသွာရယ်မိသည် ။
မီမီ လို့ပဲ ခေါ်ပါ မိုး ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲဟာ အားရင် မီမီ့ ကုမ္ပဏီကို လာလည်ဦးနော် ကော်စမစ်တစ်တွေ နိုင်ငံခြားဖြစ်တွေ ချည်းပဲ Europe က နေ တိုက်ရိုက်သွင်းတာ “ “ဟင် …ဈေးအရမ်းကြီးမှာပေါ့ မိုး က အဲ့လောက် မ၀ယ်နိုင်ပါဘူးနော် “ “အော် သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းတွေပဲ လျော့ပေးမှာပေါ့ ရှုံးရင်ရှုံး ပလေ့စေ “
ကဲ မိုး နဲ့ မီမီ ကော်ဖီ သောက်ဦး အေးကုန် ဦးမယ် “ “အင်း “ “အင် “ “ ကိုယ် စဉ်းစားနေတာ မိုးရဲ့ မီမီ့ ကုမ္ပဏီမှာ ကိုယ်တို့လည်း ရှယ်ယာ နဲနဲ ထည့်မလားလို့ “ “အင်း ကောင်းသားပဲ ကို “ “အင်းး မီမီ က အခြားသူတွေဆီကို တော့ ရှယ်ယာ ထည့်ခိုင်းလေ့ မရှိဘူး ဒါပေမယ့် မိုးတို့ ၀င်းနိုင်တို့ ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံမှာပါ အောင်မြင်မှုလည်း ရနေတာ ဆိုတော့ အကျိုးအမြတ်ကတော့ ထည့်တွက်စရာ မလိုပါဘူး စိတ်ချပါ “
ဟုတ် ကျေးဇူးပါ မီမီ မိုးတို့က စီးပွားရေး ကို အများကြီး နားမလည်ဘူး မိုးကလည်း ၀န်ထမ်းဆိုတော့ အဲ့လောက်မနှံစပ်တာလဲ ပါတယ်လေ လောလောဆယ် သားသမီး မရှိသေးဘူး ဆိုပေမယ့် နောင်တစ်ချိန် အတွက်ထည့်စဉ်းစားပီး စီးပွားရေး လုပ်ဘို့ ကို နဲ့ တိုင်ပင်နေတာလေ သူကလည်း လက်ရှိအလုပ်က ၀င်ငွေ ပုံမှန် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် နောင်ရေးအတွက် ပိုရှာ ရမယ်လေ “
ရပါတယ် မိုး ရဲ့ မီမီလည်း ၀င်းနိုင် ကို သေချာ ရှင်းပြ ပေးပါမယ် မိုးလည်း စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ပြောပါ မီမီ ရှင်းပြပါ့မယ် “ “ရပါတယ် ကို့ ကိုပဲ သေချာ ရှင်းပြပေးပါ … မိုး က ကျောင်းဆရာမ ဆိုတော့ အဲ့လောက်လည်း မအားလေ “ “ကဲ ကဲ မိုး နဲ့ မီမီ ဈေးဝယ်ကြဦးမှာမလား သွားရအောင်လေ ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ စကား ဆက်ပြောကြတာပေါ့ နောက်ကျနေမယ် “
“အိုခေ ….“ ရှော့ပင်းစင်တာ အတွင်း ဈေးလိုက်ဝယ်ကြပီး ထိုနေ့က မိုး ၀ယ်သမျှကို မီမီ က ပဲ ဒိုင်ခံရှင်းပေးလိုက်သည်မို့ မိုးက အရမ်း အားနာ မိလေသည် ။ မိုး နဲ့ မီမီ ရဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေက တစ်ခဏ အတွင်း မြန်ဆန်လွန်းလှလေသည် ။
နီးကပ်လွန်းလျှင် မမြင်ရ ရင်းနှီးမှုသည်မထင်ရပေ ကျော့ကွင်း တို့မည်သည်ကား ထင်ယောင်ထင်မှား သံသယပင်လျှင်မရှိနိုင်မှသာ သားကောင် ကို သုတ်သင်နိုင်လေသည်။
ပွေ့ချီထားသော မီမီသိမ့် ခန္ဓာကိုယ်လေးအား ကုတင် အစွန်းသို့ အသာအယာ ချပေးလိုက်လေသည် ။ထို့နောက် မီမီသိမ့် နှင့် ဘေးချင်ယှဉ်ထိုင်လိုက်ကာ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲ သွင်းလိုက်သည် ။နှင်းဆီရောင် နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ကို လက်ညိုးလေး ဖြင့် အသာ တို့ထိလိုက်သည် ။
တို့ထိလာသော ၀င်းနိုင်ရဲ့ လက်ညိုးလေးအား နုတ်ခမ်းလေး အသာဟကာ ရှေ့သွားလေးဖြင့် အသာကိုက်လိုက်သည် “နုတ်ခမ်းလေးက အရမ်းလှတာပဲ ချစ်ရယ် နုမ်းလိုက်လို့ နုတ်ခမ်းနီလေး ပျက်သွားမှာတောင် စိုးရိမ်တယ် “ “ပျက်သွားရင် မောင် ပြန် ဆိုးပေးပေါ့လို့ ဟုတ်ဘူးလား “ “ဟင်းးးဟင်းး“ မီမီ ကိုယ်လုံးလေး ကို ကုတင်ပေါ် ဖြေးညှင်း ညင်သာစွာ လှဲချလိုက်ပီး အပေါ်မှ ၀င်းနိုင် အုပ်မိုးလိုက်သည် ။
၀င်းနိုင် လက်တစ်ဘက်က မီမီသိမ့် တင်ပါးများအား ပွတ်သပ်လိုက်ကာ “ဒီအောက်မှာ မောင် ကြိုက်တဲ့ အနီရောင်လေးလား “ “သိချင်ရင် ကြည့်ပေါ့ လို့ ဟွန်းးးဟွန်းးးး“ “ချစ် ရဲ့ အလှတွေ ကို ဖြေးဖြေးချင်းခံစားပါရစေ နော် “ နှင်းဆီရောင် နုတ်ခမ်း ထူထူလေး အား ငုံစုပ်လိုက်သည်နှင့် မီမီသိမ့် မျက်လုံးတို့ မှေးစင်းသွားလေသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ဟွမ်းးး ဟင်းး “ အခန်းအတွင်း အဲကွန်း မှ မော်တာ လည်သံမှ အပ တိတ်ဆိတ်နေသည်မို့ ပြင်းရှတဲ့ အသက်ရှူသံ နုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုပ်သံ တို့ သည် အတိုင်းသား ကြားနေရသည် ။
တင်ပါး တို့ ကို ပွတ်နေသော ၀င်းနိုင် လက်တဘက်မှ မီမီသိမ့်ရဲ့ ထမိန် အထက်ဆင်စ နေရာလေး ကို စမ်းကာ ဖြေချလိုက်သည် ။ လျော့ရဲ သွားသော ထမိန် အတွင်းသို့ လက် ထိုးသွင်းကာ အတွင်းခံပင်တီလေး ပေါ်မှ တင်ပါးတွေ ကို ပွတ်ချေလိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ဟွန်းးးး ရှူးးး ဟင်းးး ပြွတ် ပြွတ် “ မီမီသိမ့် အသက်ရှူသံတွေ ပိုမိုမြန်ဆန်လာသလို အနမ်းတွေလည်း ပိုမြန်လာသည် ။
၀င်းနိုင် ဆံပင်တွေကို ဆွဲကိုင်ကာ နုတ်ခမ်းချင်း ဖိနမ်းရင် လျာကို ၀င်းနိုင် ပါးစပ်ထဲ သို့ အတင်း ထိုးသွင်း ကာ အနမ်းတွေ ပြန်ပေးနေမိသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကြား နေရာသို့ ၀င်းနိုင်လက်တွေ စုန်ချည်ဆန်ချည် ပြေးလွှား ပွတ်သပ်နေရင်း အနမ်းနေ ပြန်လည် ပေးနေမိသည် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ဟူးးးး အင်း… ရှူးးးးး ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ပေါင်တွင်းသားတွေကို ဖြေးဖြေး ချင်း ပွတ်ဆွဲလိုက်ပီးနောက် အတွင်းခံ ပင်တီ ဂွကြားနေရာလေး သို့ ပွတ်ဆွဲလိုက်သည် “အ…. မောင် “ “ချစ် …အရမ်း စိုနေပါလားး“ “အင်းး “
၀င်းနိုင် ကိုယ်လုံး ကို တွန်းထုတ်လိုက်ပီး ပက်လက်လှန် အနေအထား ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည် ။
ထို့နောက် ၀င်းနိုင်ရဲ့ စတစ်ကော်လာအင်္ကျီ အဖြူရောင် ကြယ်သီးလေး များအား တစ်ခုချင်းစီ အမြန်ဖြုတ်လိုက်သည် ။ရင်ဘက် ဟပြဲ ဖြစ်သွားသော ၀င်းနိုင်ပေါ် သို့ ခွထိုင်လိုက်ကာ ရင်ဘက် တစ်ခုလုံးနေရာ အနှံ လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ကာ ၀င်းနိုင် နုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်လိုက်ပြန်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ နုတ်ခမ်းမှ တဆင့် ရင်ဘက် နို့သီး သေးသေးလေးတွေကို လျာဖျားလေးဖြင့် တို့ ထိကာ နမ်းလိုက်ပြန်သည် ။
ထိုမှ တဆင့် အောက်သို့ ဖြေးဖြေးချင်းလျောဆင်းကာ ၀င်းနိုင် ဘိုက်သားတွေကို နမ်းရင်း ပုဆိုးကို ပါ ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ အောက်ခံ ဘောင်းဘီ အနက်ရောင် အောက်မှ လိင်တံကြီးမှာ ဖောင်းကြွနေသည် “အားးး ချစ် အားးးး “ ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုး အား လက်နှစ်ဘက် နှင့် ဆွဲ ကာ အောက်သို့ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။
အရှည် ၇ လက်မခန့် တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်လီးတံကြီးမှာ ငေါက်ကနဲ ထွက်လာလေသည် ။ အမွှေးအမျှင်များအား ရိတ်ထားသည်မို့ ရှင်းလင်းနေသည် ။ ဒစ်ဖူးကြီးမှာ တဆက်ဆက် တုန်လျှက် ထိပ်ဖျားတွင် အရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်နေလေသည် ။
၀င်းနိုင် နဲ့ ကန့်လန့် အနေ အထားဖြင့် ဖင်လေး ကုန်းလိုက်သည်မို့ ၀င်းနိုင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်လိုက်လေသည် ။ မီမီသိမ့် ၀တ်ဆင်ထားသောထမီန်မှာ စောစောက ၀င်နိုင် ဖြေချထားသည်မို့ ကွင်းလုံးကျွတ်သွားကာ အနီရောင်ပင်တီလေး ပေါ်ထွက်လာလေသည်
“အားးးး ချစ်ရယ် အနီရောင်လေးနဲ့ ချစ်တင်ပါးတွေ လှလိုက်တာ ကွာ “ တင်ပါးတို့အားလှမ်းဖျစ်ညှစ်လိုက်လေသည် ။
၀င်းနိုင်လိင်တံကြီး ကို ကိုင်က အပေါ်ယံ အရေပြားကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက် အပေါ်သို့ ပြန်တင်လိုက်ဖြင့် ဂွင်းထုသလို မျိုးလေးငါးချက်လုပ်လိုက်ပီး ထူထဲသော နုတ်ခမ်းလွှာလေးအား ဖွင့် ဟလိုက်ကာ ဒစ်ဖျားကြီးအား ငုံခဲလိုက်လေသည် “ပြွတ် “ “အားးး ချစ် နွေးသွားတာပဲ အားးးး“ ပါးစပ်အတွင်း ဒစ်ဖျား ကို ငုံထားကာ အတွင်းမှ လျာဖြင့်လိပ်ကာရစ်သာကာ ဖြင့် ကစားလေးလိုက်တော့ ၀င်နိုင် တင်ပါးတွေ ကြွကြွ တက်လာပီး မီမီသိမ့် တင်ပါးတွေ ကို အတင်း ပွတ်သပ်နေမိသည် ။
၀င်းနိုင် သာ တကိုယ်လုံး အ၀တ်အစား မရှိတော့ပေမယ့် မီမီသိမ့်ကတော့ အပေါ်မှ ထမိန် လေးသာ ကျွတ်နေသေးသည် ။ “ချစ် ကုတင်အောက်ဆင်းကွာ အကျီ ချွတ်လိုက်တော့ ချစ်ကို အနီရောင် ၀မ်းဆက်လေး နဲ့ တွေ့ချင်မြင်ချင်ပီ “ “အွန်းး“ ပါးစပ်အတွင်း မှ လီးတံကို ချွတ်လိုက်ကာ ကုတင်အောက်သို့ ဆင်းလိုက်ရင်း အပေါ်အတျီရင်ဖုံးကြယ်သီလေးများအား ဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်လေသည် ။
အရမ်းလှတာပဲ ချစ်ရယ် ချစ်အသား ဖြူဖြူလေးနဲ့ အနီရောင်လေး နဲ့ အရမ်းလိုက်တယ် “
ကုတင်စောင်းတွင် ခြေထောက်ကို ကားကာ ချလိုက်ပီး မီမီသိမ့်ကို ဆွဲယူကာ ပေါင်ခွကြားတွင်းထိုင်ခိုင်းလိုက်လေသည် ။
ဒူးလေးထောက်ကာ ထိုင်ချလိုက်ပီး ၀င်းနိုင်လီးတံ ကို ပြန်လည်ကာ ငုံခဲလိုက်ပြန်သည်
“ပြွတ်ြ ပွတ် ပြွတ်“မီမီသိမ့် ခေါင်းကို ဆွဲကိုင်ထားရင်း လီးစုပ်ခံကာ အပြည့်အ၀ ခံစားလိုက်သည်။ “အားးး ကောင်းတယ် ချစ် အားးး အရင်းထိ စုပ်လိုက်တော့ အားးး“ ကြိုက်ရဲ့လား ချစ် “လီးတံကြီးကို စုပ်ပေးနေရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြ ကာ ဆက်စုပ်ပြန်သည်။ မီမီသိမ့်အား လက်မောင်းမှ လှမ်းဆွဲ ယူလိုက်ပီး ကုတင်ပေါ် တွင် ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ၀င်းနိုင်က မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်မို့ မီမီသိမ့်မျက်နှာနှင့် ၀င်းနိုင်လီးတံက တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွာသည် ။ မီမီသိမ့် ခေါင်းလေးကို ဆွဲယူလိုက်ကာ နုတ်ခမ်းဝ တွင် လီးတံ တေ့ပေးလိုက်သည်နှင့် အငမ်းမရ ပြန်စုပ်ပြန်သည် ။ မီမီသိမ့်လက်တွေကလည်း ၀င်းနိုင် ပေါင်ကို တစ်ဘက် ဥ ကို တစ်နေရာ ကိုင်က ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း စုပ်ပေးနေသည် ။ မီမီသိမ့် ခေါင်းကို ကိုင်ကာ လီးတံနဲ့ မီမီသိမ့် ပါးစပ်ကို အဖုတ် လိုးသလို သွင်းထုတ်လုပ်ပေးနေသည်“အင် အင့်အင့် အင့် အားး “ မီမီသိမ့် ပါးစပ် မှ ထွက်လာသော သရေတွေသည် ၀င်းနိုင်လီးတံမှ တဆင့် ဥတွေဆီ စီးကျလာသည်။ စောစောက ဆိုးထားခဲ့သော နှင်းဆီရောင် နုတ်ခမ်းနီရဲရဲ လေးမှာ လည်း အရောင်တွေ ပြယ်ကုန်လေပြီ ။ “အင်း အင်း….အားးး ရှီးးးးး အားးးးး““ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ် “ပါးဖောင်းဖောင်းလေးများ ချိုင့်ဝင်နေအောင် အားရပါးရ စုပ်နေသည် ။ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ဆယ်မိနစ်သာသာလောက် မီမီသိမ့် ပါးစပ်အတွင်းသို့ လီးတံ ကြီး ထုတ်သွင်းလုပ်ပီးနောက် ပြန်ချွတ်လိုက်လေသည် ။ သုတ်ရည်ကြည်တွေနှင့် သရေတွေ ရောလျှက် ရွဲနစ်နေသော မီမီသိမ့် နုတ်ခမ်းအား မေးစေ့လေး ကို ကိုင်ကာ တယုတယ နမ်းပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက် မီမီသိမ့်က ကုတင်ပေါ် တွင် ပက်လက်လှန် အနေအထား ဖြင့်လှဲချလိုက်သည် ။ မတ်တပ်ရပ်နေသော ၀င်းနိုင်က တွဲလောင်း ကျနေသော မီမီသိမ့် ရဲ့ ခြေတံ လေး ကို ဆွဲယူလိုက်သည် ။
ခြေထောက်တစ်ချောင်းက ကုတင်အောက် တွဲလောင်းကျနေပီး နောက်တစ်ချောင်းကတော့ ၀င်းနိုင်လက်ထဲ တွင် ရောက်ရှိနေလေသည် ။ခြေသည်းရှည်ရှည်လေးတွေ ပေါ် တွင် အနီရောင်ခြေသည်းနီလေး များဆိုးထားပီး အဖြူရောင် အစိမ်းရောင် ကာလာစုံလေး များဖြင့် ပန်းပွင့်ပန်းခက်ပုံစံလေးများ ခြယ်သထားလေသည် ။
မွှေးညှင်းနုနုလေးများ ပေါက်နေသော ခြေတံ တလျောက် ခြေသလုံးမှ ပေါင်ရင်း အထိ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ပီးနောက် မီမီသိမ့် ခြေချောင်းလေးများ ကို ၀င်းနိုင် ပါးစပ်ထဲ ဆွဲသွင်းကာ စုပ်ပေးလိုက်တော့သည်။“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “
“အားးးး မောင်ရယ် ….“ မီမီသိမ့် ခြေမ လေး ကို ဆွဲစုပ်လိုက်စဉ် ကြက်သီးမွှေးညှင်းများပင် ထသွားလေသည်။
၀င်းနိုင် ပါးစပ်ထဲမှ ခြေမလေး ကို ကွေးဆန့် လုပ်ပေးလိုက်ရင်း အစုပ်ခံနေလိုက်သည် ။ ထို့နောက် ခြေဖဝါးပြင်လေးအား လျာပြားလေးဖြင့် အထက်အောက် စုန်ဆန်ကာ ယက်ပေးလိုက်သည်။
မီမီသိမ့် ကုတင်အောက်တွဲလောင်းချထားတဲ့ ခြေထောက်တစ်ဘက်ပါ မြောက်တက်လာပီး ၀င်းနိုင် ပုခုံးပေါ်သို့လှမ်းတင်လိုက်သည် ။ ၀င်းနိုင်လည်း ခြေထောက် နှစ်ချောင်းလုံးကို ပူးကာ ခြေဖမိုးလေးများကို အနမ်းခြွေလိုက်ရင်း မီမီသိမ့်ကို ကုတင်အစွန်း မှ အလယ်အထိ တွန်းလိုက်ကာ ခြေထောက်တွေကို ကုတင်ပေါ် ချပေးလိုက်သည် ။
ထို့နောက် ခြေသလုံးသားလေးတွေ ကို နမ်းရင်း အပေါ်သို့တက်လာလေသည် ။ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်လိုက် လျာဖျားလေး ဖြင့်တို့ထိလိုက်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အပေါ် သို့ တက်လာရင်း အနီရောင်ပင်တီလေးရဲ့ အလယ်ဗဟိုနေရာသို ရောက်ရှိသွားလေသည် ။ ပင်တီအလယ်နေရာလေးမှာ စိုထိုင်းထိုင်းဖြင့် ကွက်နေလေပြီ ။ စောက်ရည်နံ စိမ်းရွှင်ရွှင် အနံ့ တို့က ၀င်းနိုင်နှာခေါင်းဝသို့ တိုးဝင်လာသည် ။
ဒီအနံ့သည် ကာမစိတ်တို့ ကို ပိုမိုနှိုးဆွနိုင်ပေသည် ။ ပင်တီလေးပေါ်မှာ အဖုတ်နေရာလေးသို လေးငါးချက် ယက်သပ်လိုက်ပီးမှ ပင်တီမျော့ကြိုးလေးအား ဆွဲယူကာ အောက်သို့ လျောချလိုက်သည် ။ မီမီသိမ့်က လည်း တင်ပါး ကြီးတွေကို အသာအယာ ကြွပေးလိုက်သည် ။
အမွှေးရိတ်ပီးကာစ ငုတ်စိလေးတွေ သာပေါက်နေသေးသဖြင့် စောက်ဖုတ် မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး မြင်နေရသည် ။ လက်ခလယ်လေး တစ်ချောင်းဖြင့် စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းလေး တလျောက် ပွတ်သပ်လိုက်ပီးအ ထဲ သို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည် “အားးးးရှီးးးး အားးးမောင် အားးးးး“ မီမီသိမ့် ဖင်ကြီး မြောက်တက်လာကာ ငြီးငြူသံတွေ ထွက်လာသည် ။
ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဘေးသို့ အသာ ကားပေးလိုက်တာ နဲ့ ၀င်းနိုင် ခေါင်းကြီး ငုံကာ စောက်ဖုတ် အုံကြီး ကို ဆွဲစုပ်လိုက်လေ တော့သည်။ မီမီသိမ့် ပေါင်တံ တွေ ကားသထက်ကားလာသည် ။ စောက်ဖုတ် နုတ်ခမ်းသားလေး တွေ ကို ဘေးသို့ ဆွဲဖြဲလိုက်တော့ အလယ်တည့်တည့်မှ အစိချွန်ချွန် ငုတ်စိလေး ပေါ်လာသည် ။
ထို အစိလေးအား လျာထိပ်မာမာလေး ဖြင့် တွန်းကာ တို့ကာ ဖြင့် ကစားပေးလိုက်တော့ မီမီသိမ့် တွန့်တွန်လူးနေအောင် ခံစားလိုက်ရသည်“အမလေးးးး အားးးး မောင်ရေ အားးး သေပါပီ အားပက်လက်လှန်ရင်း ဖင်ကြီးကို အပေါ်သို့ ကော့ကော့ပေးနေမိသည် ။ အိပ်ယာခင်းစတို့ကို လက်နှစ်ဘက်မှ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်စုပ်ကိုင်ထားမိသည် ။ စောက်ရည်တွေ ရွှဲနစ်လာကာ တင်ပါးနှစ်ခုကြား စအိုဝ ထိ စီးကျလာသည် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အပေါ်သို့လှန်တင်လိုက်ရင်း ပေါင်ကြားထဲမှာ အငမ်းမရ စုပ်ပေးယက်ပေးနေမိသည်။ စက်ပတ် အတွင်းသားထဲသို့ လျာဖျားသည် မမှီတမှီ လှမ်းဝင်နေသေးသည် ။ “ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ် ပွတ် ရွှတ် “ “အားးး အမလေးလေးး အားး“ အမွှေးအမျှင်တွေ ရိတ်ထားတာပို့ ယက်ပေးရတာ ပိုကောင်းနေသည် ။ စောက်ဖုတ် နုတ်ခမ်းသားများ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရလေသည် ဒီတစ်ကြိမ်သည် သူတို့ နှစ်ဦး အတွက် တတိယ အကြိမ်မြောက်တွေ့ ဆုံခြင်းဖြစ်သည် ။ ပထမ တစ်ကြိမ်တွင် မီမီသိမ့် အနည်းငယ် ရှက်ရွံ့နေသော်လည် ဒုတိယ အကြိမ်တွင်ကား ကာမ အရသာ ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားတတ်လာသည် ။ ဒုတိယ အကြိမ် အပြီး သူတို့ နှစ်ယောက် နောက်တစ်ခါတွေ့ကြလျှင် အမွှေးများ ရိတ်လာကြဘို့ သဘောတူ ဖြစ်သည် ။ ၀င်းနိူင်ခေါင်းကို အတင်းတွန်းထုတ်ပီး ထထိုင်လိုက်ရသည် ။ မီမီသိမ့် မခံစားနိုင်တော့ “မောင် …လုပ်ပေးတော့နော် ချစ် တအား စိတ်ဆာနေပီ လိုးပေးတော့ “ “အင်းးး ချစ် လေးဘက်ထောက်လိုက်နော် ချစ်ဖင်ကို ကြည့်ပီး လိုးချင်တယ် “ “အင်းးး ကုန်းလိုက်မယ် “ ၀င်းနိုင်ဘက်ကို ဖင်ပေးကာ လက်နှစ်ဘက်ကို တထောင်ဆစ်ကွေးထောက်ချလိုက်ပီး တင်ပါးကို အပေါ်သို့ ခပ်မြောက်မြောက် အနေအထားလေး လုပ်ပေးလိုက်သည် ။ အိမ်ထောင်သက် သုံးနှစ်ရှိပီဆိုသော်လည်း သားသမီး မထွန်းကားသေးပဲ နေ့တိုင်းလိုလို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ် ဂျင် ကစား ထားတာကြောင့် တင်ပါးကြီးတွေ မှာ လုံးဝန်း တင်းခဲနေသည် ။ အသားအရည်ဖြူဝင်းပီး စောက်ဖုတ်မှာလည်း အခြားမိန်းမတွေလို မဲညစ်မနေပဲ နီညိုရောင် ဖြစ်နေသည် ။ မီမီသိမ့် ဖင်နောက်တွင် ဒူးထောက်နေရာ ယူလိုက်ပီး လီးတံကို အဖုတ်ဝမှာ အသာတေ့လိုက်သည် ။ ထို့နောက် အဖုတ်ထဲ လီးမထိုးသွင်းသေးပဲ မချွတ်ရသေးပဲ ကျန်နေသော ဘော်လီလေးအား ချိတ်လေးကို အသာဆွဲဖြုတ်လိုက်သည် ။ နို့အုံနှစ်ဖက်ကို လက်လျှိုကာ ဆွဲထားလိုက်သည် ။ “အားးး မောင် သွင်းလိုက်တော့လေ “ မီမီသိမ့် စကား မဆုံးလိုက်ပါ ၀င်းနိုင်လီးတံကြီးက အဖုတ်အတွင်းသို့ ထိုးဝင်လာလေသည်။ “အားးး ချစ် စက်ပတ် ကို မောင်လိုးနေပီ ကောင်းလားးး အင့် အင့် အင့် “ “အားးး ကောင်းတယ်မောင်လိုးပေးးး အားးး နေချင်နေတာကြာပီ အားးးး ကြိုက်တယ် အားးး “ ၇ လက်မလောက်အရှည်တုတ်တုတ်ခဲခဲ လီးတံကြီးက မီမီသိမ့် စောက်ဖုတ် အုံကြီးအား တဇွပ်ဇွပ်ဖြင့် ထိုးခွဲကာ အ၀င်အထွက် စည်းချက်ကျကျ ဖြစ်နေသည်။ “အင်းးးး ချစ် စကောဝိုင်းသလိုမွှေပေး အင်းးး ဟုတ်တယ် အဲ့လို အားးးကောင်းတယ် မွှေ “ လီးအရင်းထိ ထိုင်ချပီး စကောဝိုင်းမွှေပစ်လိုက်သည် ။ လီးအရင်းထိ ထိုင်ထားချထားသည်မို့ လီးတံကလည်း အဖုတ်ထဲ အဆုံးထိ ၀င်နေသလို ၀င်းနိုင်ရဲ့ လီးအရင်းက ရိတ်ပီးကာစာ ပြန်ပေါက်နေသော အမွှေးငုတ်တို တို့သည် မီမီသိမ့် စောက်စိနှင့် ဖိကပ်ထိမိနေကာ စကော ဝိုင်းပွတ်လိုက်တိုင်း အစိကိုအမွှေး ငုတ်တိုဖြင့် ထိုးနေသလို ဖြစ်တဲ့ အတွက် မီမီသိမ့် ပိုဖီးလ် နေလေသည် ။ မီမီသိမ့် နို့အုံကြီးတွေ ကို လှမ်းကိုင်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးများအား လက်ညိုးလက်မ ဖြင့် ဖိချေပေးနေသည် ။ ထို့နောက် တင်ပါးကြီး တွေကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပြန်သည် ။ ကြီးမားဖွံ့ဖြိုးတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ကိုင်လိုက်ရသည်မှာ အားရစရာပင် ။ ၀င်းနိုင်ရင်ဘက်ပေါ် သို့ လက်ထောက်ပီး အဖုတ်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း မွှေလိုက်သည်။ မီသိမ့်လည်း ၀င်းနိုင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ကာ ကုတင်စောင်းတွင် လက်ထောက်ပီး ဖင်ကို နောက်ပစ်ပေးထားလိုက်သည် ။ ၀င်းနိုင်လည်း မီမီသိမ့်နောက်တည့်တည့်မှာ နေရာ ယူလိုက်သည် ။ ပေါင်ကားထားသဖြင့် စောက်ပတ်ကြီးမှာ ဟစိစိလေး ဖြစ်နေသည် ။ ကုတင်စောင်း မှာ လက်ထောက်ကာ ဖင်ကော့ပေးထားသော မီမီသိမ့် ဖင်လုံးကြီးမှာ ၀င်းနိုင်ပေါင်သားတွေ ဖြင့် ရိုက်ခတ်ထားသဖြင့် နီရဲ စပ်နေသည် ။ စောက်ရည်တွေ ရွဲနစ်နေအောင် ပေနေသော လီးတံကြီးကို ဖင်နှစ်ခြမ်းကြား အမြှောင်းလိုက် စအိုဝ တည့်တည့် တွင် တင်လိုက်ကာ တင်ပါးတွေကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် အတွင်းဘက်သို့ ဖိထားလိုက်ရင်း ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည် ။ “အားးး မောင် ထည့်တော့လေ ဘာလို့ ပွတ်နေတာလဲ “ “ချစ် ဖင်ကြီး ကို အသည်းယားလို့ အင့်အင့်အင် “ “အားးး မောင် အားးး“ လီးတံ ကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပီး ခန္ဓာကိုယ် ကို ငုံလိုက်ကာ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြား ရှိ စအိုပေါက်လေး ကို လှမ်း ယက်လိုက်သည် “အ …မောင် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အ …… မောင် ချစ်ဖင်ပေါက် အားးး အ အ “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး မောင်ရယ် “ ၀င်းနိုင် ကိုယ်ကို ပြန်မတ်လိုက်ပီး လီးဒစ်ခေါင်းကို စအိုပေါက် တဝိုက် လှည့်ပတ်ကာ ပွတ်ပေးနေလိုက်သည် “မောင် လုပ်ချင်ရင် ဖြေးဖြေး နော် ချစ် ခွင့်ပြုပေးမယ် ဒါပေမယ့် ဖြေးဖြေးနော် “ မီမီသိမ့် သိပါသည် ။ နောက်ပေါက်ကို ၀င်းနိုင် လိုချင်နေသည်ဆိုတာကို ။ “အင်း ဖြေးဖြေး စမ်းထည့်ကြည့်မယ်နော် ချစ် ခံဖူးလား “ “အင်း တစ်ခါနှစ်ခါ ခံဖူးပါတယ် ကြာပါပီ ဖြေးဖြေးနော် “ မီမီသိမ့် ဖင်ပေါက်ပေါ် တံတွေးတစ်ချက် ထွေးချလိုက်သည် ။ ထို့နောက် လီးဒစ်ခေါင်းမြုံ့ရုံ အသာချော့သွင်းလိုက်သည်။ “အားး ရှီးးး “ “ကြပ်တယ်မောင် ဖြေးဖြေး အားးးး “ “ အင်းးး အားးး ၀င်သွားပီ ချစ် အားးး ဆက်သွင်းမယ်နော် အားးး“ “အင်းးး အားးးး “ လီးတံသည် တဖြေးဖြေး ဖင်ဝ ထဲ တစ်ရစ်ရစ် စိုက်ဝင်သွားလေသည်အားးး ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရယ် “ “အင်း မောင် ခနလေး မလှုပ်နဲ့ဦး အသက်ရှူဦးမယ် ဟားးးးးးး ကြပ်လိုက်တာ “ မီမီသိမ့် အသက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ရှူသွင်းလိုက်ရသည် ။
သူ့ယောင်္ကျားနဲ့ တစ်ခါနှစ်ခါ ခံဖူးသည် ။ ကြာပီမို့ အခုလို ထပ်လုပ်ကြည့်တော့ ကြပ်လွန်း အားကြီးသည် ။ ၀င်းနိုင်လီးက လည်း မာတောင့်နေသည်မို့ ဖင်ထဲမှာ တစ်စို့စို့ကြိး ဖြစ်နေသည် ။ “ရပီမောင် ဖြေးဖြေး“ “အင်းးး “ လီးတံကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ ဒစ်ခေါင်း မြုပ်ရုံ အနေအထားရောက်တော့ လီးတံပေါ် တံတွေး ထပ်ထွေးချလိုက်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်သွင်းလိုက်ပြန်သည် ။
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးး ချစ်ရယ် အခုမှ ပဲ ချစ်တကိုယ်လုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရသလို ခံစားလိုက်ရတယ် အားးးး“ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “ဖွတ် ဖွတ် “ “အားးအ အ အားးး မောင် အားးးအမလေးး အားးး“ “အားး ချစ် မောင် ပီးတော့မယ် အားးး“ “အင်းးးအားးး ဆောင့် အားးး မောင် အားး“ “အားးးးအ အ အားးး မောင် အားးးအမလေးးးး အားးး“ “အင့်ကွာ အင့် အင့် အင့် အင့် အင့် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် “ “အား အားး အားး ထွက်ပီ အား ရှီးးး အား “ ဘယ်လိုမှ ဆက်ထိန်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ မီမီသိမ့် ဖင်ပေါက်ထဲ သို့ လရေတွေ ဖျောခနဲ ဖျောခနဲ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည် “အားးးး ရှီးးးး အားးး မောင်ရယ် အားးးးး “ မီမီသိမ့် ဖင်ဝမှာ လီးတပ်လျှက် ကုတင်ပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သား ထပ်လျှက် ပြိုကျသွားလေတော့သည်။
တကယ်တော့ မီမီသိမ့် နဲ့ ၀င်းနိုင်က ကျောင်းတုန်းက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ အဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ငယ်ချစ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ မပေါင်းဖက်ရလေပဲ ဝေးကွာခဲ့ကြရာမှ လွန်ခဲ့သော သုံးလကျော်လောက်က ဒီမြို့လေးမှာ အမှတ်မထင် ပြန်တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ကြသည် ။
ပြန်လည် တွေ့ ဆုံပီး အပြင်မှာ ကော်ဖီသောက်ကြ စကားပြောကြနှင့် ငယ်က အချစ်တွေ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာကြခြင်းဖြစ်လေသည် ။ ငယ်စဉ်က တဏှာမဖက်တဲ့ အချစ်တွေ နဲ့ ချစ်ခဲ့ကြပေမယ့် အခု လို ပြန်တွေ့ချိန်မှာ တော့ နှစ်ဦးစလုံးက အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း ဖြစ် တဲ့ အတွက် တဏှာရဲ့ အရသာကို သိရှိခံစားလာရလေသည် ။
နှစ်ဦးစလုံး အိမ်ထောင်ရေး ကို ထိခိုက်မည် စိုးသဖြင့် အဆင်ပြေသည့် အချိန်တွေမှသာ တွေ့ကြဘို့ ကတိပြုခဲ့ကြသည် ။သူတို့ နှစ်ယောက်ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွေ တော့ ကသိကအောက် မဖြစ်စေလို ။ ဒါကြောင့်လည်း ၀င်းနိုင်ကို သူ နဲ့ အမြဲ တွေ့နိုင်စေရန် စီးပွားရေးတွင် ၀င်ပါခိုင်းသည် ။
ထို့နောက် ၀င်းနိုင်မိန်းမ မိုးသန္တာ နှင့်လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနေလိုက်သည် ။ ဒါမှလည်း တခါတလေ တွဲသွားတွဲလာ သိရှိသွားလျှင် သံသယ မ၀င် စေရန် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ဖြစ်သည် ။ မီမီသိမ့် အမျိုးသားမျိုးမင်း ကလည်း စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက် အချိန်ပြည့် အလုပ်နှင့် လုံးခြာလည်လိုက်နေသည် ။
သို့ပေမယ့် မီမီသိမ့် ကို လည်း အရမ်းချစ်သည် ။ လိုလေသေးမရှိထားသည် ။ မီမီသိမ့် ကိုယ်တိုင် က အလုပ်လုပ်ချင်သဖြင့်သာ ကုမ္ပဏီ ထူထောင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည် ။ မျိုးမင်း ကလည်း အသက်အရွယ်အားဖြင့် ကြီးရင့်သေးသူတစ်ယောက်တော့မဟုတ် အသက်သုံးဆယ်သာ ရှိသေးသည် ။
တက္ကစီ တစ်စီး လမ်းဘေး သစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင် ရပ်ထားသည် ။ ကားပေါ်တွင်တော့ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာနှင့် နောက်ခန်းတွင် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားထားသော အမျိုးသား တစ်ဦး ။ နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ခုနှစ်နာရီခွဲသာသာရှိသေးသည် ။ ကားဘက်မှန်ထဲ ကို ခနခန လှမ်းလှမ်းကြည့်နေမိသည် ။
မကြာပါ …. အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံလေးနဲ့ ခြင်းတောင်းလေးဆွဲလာသော ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြတ်လျောက်လာသည် ။ ဆရာမ က ကားတံခါးနားအရောက် ခြေအစုံ ရပ်တန့်သွားကာ ဘေးဘီသို့ တစ်ချက် ဝေ့ဝိုက်ကြည့်ပီး ကားတံခါးလေး ဖွင့်ကာ ၀င်လိုက်သည် ။ “မောင် ….စောင့်နေတာ ကြာပီလား “ “မကြာသေးပါဘူး အခုလေးတင်ပဲ ရောက်တာ ကျောင်းကို ခွင့်တိုင်လာခဲ့တယ်မလား “ “ဟုတ် တိုင်ခဲ့တယ် တခြားလူတွေ တစ်ခုခု ထင်မှာစိုးလို့ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ပဲ ထွက်လာတာ “ “ကားဆရာ … ***** လိပ်စာ ကိုမောင်းပေးပါ “ ကားလေး ဘီးစလိမ့်သွားသည် ။
ကားဆရာကတော့ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နှင့် မောင်းနှင်နေလေသည် ။ ခြံဝင်းလေးနှင့် နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေး ရှေ့မှာ ကားရပ်သွားသည် ။ “ကျွန်နော် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့မယ် ဖုန်းဆက်တဲ့ အချိန် လာခေါ်ပေးပါ“ လက်ထဲမှာ တစ်သောင်းတန် သုံးရွတ် ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။ “အပြန်လာခေါ်ခပါ ယူသွားလိုက်ပါ ဆက်ဆက် လာခေါ်ပေးပါ “ “စိတ်ချပါဆရာ ဖုန်းသာဆက်လိုက် “ အိမ်လေးထဲသို့ နှစ်ယောက်သား ၀င်လာလိုက်သည် ။
အိမ်တခါးကို သေချာစွာ ပြန်ပိတ်လိုက်ပီး နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက်ဖက်ကာ တက်လာခဲ့ကြလေသည် ။ အခန်းထဲ အရောက် အခန်းတံခါးကို သေချာစွာ ပိတ်လိုက်လေသည် ။ အိမ်ကြီးက တိတ်ဆိတ်နေသော်လည်း အခန်းတွေရဲ့ လုံခြုံလှသည် ။
အခန်းထဲမှာ သီချင်းသံ ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ထားလျှင်တောင် အပြင်က ကြားနိုင်မည်မထင် ။ အခန်း ထဲ စားပွဲပေါ်သို့ ဆွဲခြင်းတောင်းလေး တင်လိုက်ပီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားကြလေသည် ။ ထို နှစ်ဦးသည်က အခြားသူများ မဟုတ်ပါလေ မီမီသိမ့် အမျိုးသား မျိုးမင်းနှင့် ၀င်းနိုင် မိန်းမ မိုးသန္တာတို့ပင်ဖြစ်လေသည် ။
လွမ်းလိုက်တာ မောင်ရယ် “ “မောင်လည်း အတူတူ ပါပဲ မိုးရယ် “ ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခု ခွာလိုက်ကာ တစ်ယောက်ခါးတစ်ယောက်ဖက်ထားရင်း ရီဝေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ နဲ့ ကြည့်မိကြသည် ။
ကျောင်းဝတ်စုံ ခါးတို အကျီအဖြူရောင်လေးနဲ့ ထမီ အစိမ်းရောင်လေးအား ခပ်ကြပ်ကြပ်စည်းနှောင်ထားပီး ဆံထုံးလေး ထုံးထားသော မိုး ကို မျိုးမင်းကြည့်မ၀ ဖြစ်နေလေသည် ။ မိုးသန္တာ မေးစေ့လေးအား လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ နုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်လိုက်သည် ။
ကျောင်းစိမ်း ထမီပေါ်မှ တင်ပါးလေးတွေ ကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရင်း အနမ်းမိုးတွေ ဆက်တိုက် ရွာနေမိသည် ။ တင်ပါးအောက်ခြေနားတွင် အတွင်းခံမျော့ကြိုးရာလေးက အထင်းသား ဖြစ်နေသည် ။
နုတ်ခမ်းချင်း ပြန်ခွာလိုက်ပီး မျိုးမင်း ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီလိုက်သည် ။ မျိုးမင်း က မိုးသန္တာရဲ့ တင်ပါးလေးတွေ ဆက်ပွတ်ပေးနေလိုက်သည် ။ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ကျော်လောက်က ရခဲ့ဖူးသော ကိုယ်သင်းရနံ့လေးတွေ ကို ပြန်လည် ရှူရှိုက်မိကြသည် ။
တင်းရင်းလွန်းတဲ့ ရင်သားတွေက မျိုးမင်း ရင်ဘတ် နှင့် ဖိကပ်ထားမိလေသည် ။ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲကို လက်နဲ့ ဆွဲပွတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ မိုးသန္တာရဲ့ အသက်ရှူသံတွေ မြန်ဆန်လာရသည်။ “မိုးးးး “ “ရှင်….“ “အရင်တုန်းက လို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေပီကွာ“ “အတူတူပါပဲ မောင်ရယ် “ “မိုးက အရင်တုန်းကလို စကပ်တိုမလေး မဟုတ်တော့ပဲ ကျောင်းဆရာမ ၀တ်စုံလေးနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပီး ရင်ခုန်နေမိတယ် “ “စကပ်တိုမလေး တုန်းကလိုပဲ အချစ်တွေ များများ ပေးပါမောင် “ “ဆရာမလေး ကို စကပ်တိုမလေး ထက် အချစ်တွေ ပိုပေးချင်တာပါ “ “အင်းးးး အားး မောင် ရယ်“ “မောင့်လီးကို ကိုင်ကြည့်ပါဦး မိုး “ “အင်းးးး အကြီးကြီးပဲနော် အောက်ခံဘောင်းဘီကြီး ပေါက်ထွက်သွားဦးမယ် “ မျိုးမင်း ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပီး အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ပေါ်မှာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည် ။
အရင်လို နမ်းမပေးချင်ဘူးလား “ “အင်းးးး မောင့် စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရမယ်နော် “ မိုးသန္တာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည် ။ မျိုးမင်း လီးနဲ့ သူ့မျက်နှာက တစ်တန်းတည်း အနေ အထား ဖြစ်သွားသည် ။ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးလေး ကို အသာအယာ ကိုင်ပီး ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အောက်က လီးက ငေါက်ကနဲ ထွက်လာသည် ။
မျိုးမင်းလည်း အပေါ် အကျီကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ မျိုးမင်း အ၀တ်အစားမဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည် ။ သူ့ရှေ့မှာတော့ ကျောင်းဆရာမ ၀တ်စုံလေးနဲ့ မိုးက ဒူးထောက်ကာ မျိုးမင်းလီး ကို အသာကိုင်ပွတ်ပေးနေသည် ။ “မောင့်လီးက အရင်ထက် ပိုကြီးလာသလိုပဲနော် “ “အင်းးး စုပ်ပေးတော့ “ “အင်း “ လီးတံထိပ်ဖျားလေး ကို လျာနဲက အသာ တို့ထိလိုက်ကာ နုတ်ခမ်းလေး ဟပီး ငုံပစ်လိုက်သည် “အားးးရှီးးး လီးစုပ်နေရင်း မိုးသန္တာ အရင်တုန်းက အချိန် တွေကို ပါ သတိရလိုက်မိသည် ။
တက္ကသိုလ် တက်တဲ့ အချိန်မှာ မောင်နဲ့ ရည်းစားတွေ ဖြစ်ပီး ချစ်ရည်လူးခဲ့ကြတာ အကြိမ်ကြိမ် ။ ထို့နောက် မောင်က နိုင်ငံခြားထွက်သွားသည် ။ သူလည်း ၀င်းနိုင်နဲ့ မိဘတွေ ပေးစားလို့ သဘောတူလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပီး ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်အဖြစ် ဘ၀ ကို ရပ်တည်လာခဲ့ကာ မျိုးမင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခဲ့လေသည် ။
အခု ပီးခဲ့တဲ့ သုံးပတ်ကျော်လောက်က မျိုးမင်းနဲ့ အမှတ်မထင် ပြန်ဆုံကြတော့ နှစ်ယောက်လုံး အိမ်ထောင်ကျနေသည့် အဖြစ် ဖြစ်နေသည် ။ သို့ပေမယ့်လည်း ငယ်စဉ်က အချစ်တွေ က တဖန်ပြန်မွေးဖွားလာသည်မို့ ဒီနေ့ အချိန် က သူတို့ နှစ်ဦးအတွက် ပထမဆုံး ပြန်လည်အချစ်နယ်ကျွံကြခြင်းဖြစ်လေသည် ။
မျိုးမင်းက တောင်းဆိုလာခဲ့သည်မို့ တော်တော်ကြာစဉ်းစားခဲ့မိသေးသည် ။ သို့သော်လည်း အရင်က အချစ်တွေက လွန်ဆန်မရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ခံစားမှုတွေ ပြန်လိုချင်ခဲ့မိသဖြင့် လိုက်လျောရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ကျောင်းကို ခွင့်တိုင် ၊ ၀င်းနိုင်ကိုတော့ ကျောင်းသွားမည်ဟု လိမ်ညာခဲ့ကာ စောစော ထွက်လာဖြစ်ခဲ့လေသည် ။ “အွတ် အွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းလိုက်တာ မိုးရယ် အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ မိုးက စုပ်တာ တော်လိုက်တာ “ နုတ်ခမ်း နှစ်ဘက်ကို ဖိကပ်ထားရင်း အတွင်းလျာကို ရစ်ပတ်ကစား က အားရပါးရ စုပ်နေမိသည် ။
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ““အားးးး မိုးးးးကောင်းလိုက်တာ အားးးးး “ လက်တစ်ဘက်ကလည်း ဥတွေကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသေးသည် ။ “အားးးရှီးးးးအားးးး“လီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ပြန်ထုတ်လိုက်ကာ “ကောင်းလားမောင် “ “အင်းးး အရင်တုန်းကထက် ပိုကောင်းလာတယ် ယောင်္ကျားရပီး ပိုကျွမ်းလာတယ်ထင်တယ် “ “ဟွန်းးးးမောင်နော် “
လီးကို ပြန်ငုံကာ စုပ်လိုက်သည် “အားးးးး မိုးရယ် ကောင်းလိုက်တာ “ ကျောင်းဆရာမ ၀တ်စုံလေးဖြင့် လီးစုပ်ပေးနေသော မိုးသန္တာကို ငုံကြည့်ရင်း စိတ်တွေ ပိုထလာရပြန်သည်။
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “အားးး မိုး မောင် လိုးချင်ပီကွာ စုပ်တာ ရပ်လိုက်ဦး “ လီးတံ ကို ချွတ်လိုက်ပီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ အပေါ်မှ ရင်ဖုံးအကျီအဖြူကြယ်သီးလေး ကို ဖြုတ်မည်အလုပ် “မချွတ်နဲ့မိုး မိုးကို ကျောင်းစိမ်းလေး နဲ့ လိုးချင်သေးတယ် ပီးမှ မိုးအဖုတ်ကို အားရအောင် ပြန်ယက်ပေးမယ် အခု လိုးချင်နေပီ ကုတင်မှာ လက်ထောက်ပီး ကုန်းလိုက် “ “အင်းးးး ပါ မောင့်သဘောနော် “ ကုတင်စောင်းမှာ လက်လေးထောက်ပီး ကုန်းလိုက်တယ် ။ ကျောင်းစိမ်း ထမီ အောက်မှ ဖင်အိုးကြီးတွေ က ကားပီး အယ်ထွက်နေသည် ။ မျိုးမင်းလည်း မိုးသန္တာနောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရာယူလိုက်ပီး တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်သည် ထို့နောက် ထမီလေးကို အသာလှန်တင်လိုက်သည် ။ အောက်ခံပင်တီ အသားရောင်လေးမှာ တင်ပါးတွေကို တင်းကြပ်နေအောင် ထိန်းထားသည်။ “အားးးး မိုးတင်ပါးကြီးတွေက အရင်ထက် ပို ထွားလာတယ်ကွာ “ဖြန်းးးဖြန်းးး“
“အ … မောင် အားးး“ မောင်က သူမ တင်ပါးကို အားမလို အားမရ အမြဲရိုက်တတ်သည်ကို ပြန်သတိရမိကာ အဖုတ်ထဲမှ အရည်ကြည်များ စိမ့်ကနဲ စိမ့်ကနဲ ကျလာသည်။“ဖြန်းး ဖြန်းးး“ “အားးးးရှီးးးးမောင် လိုးတော့ကွာ ခံချင်ပီ“ မိုးသန္တာ အတွင်းခံပင်တီလေးကို ဒူးနားလောက်ထိ ဆွဲချလိုက်သည် ။လီးကို အဖုတ်ဝ မှာ အသာတေ့လိုက်ပီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုသွင်းပေးလိုက်သည်။“အားးးး ၀င်လာပီမောင် အားးးးအမလေးးးး“ လည်ပင်းအထက်နားရှိ ဆံထုံးလေး ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ လက်တစ်ဘက်က ခါးစပ်နားလေး ကို ကိုင်ထားရင် ဆောင့်ပေးလိုက်သည် “အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးး ကောင်းတယ်မောင် လိုးးးး လိုးးးး အားးးရှီးးးးဟင့် ဟင်းးးး“ “အင့် အင့် အင့် ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် အင့် “ “အားးး မောင့် အလိုးမခံရတာ ကြာပီကွာ အားးးး “ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေးဖြင့် ဖင်ကုန်းခံပေးနေသော မိုးသန္တာကို လိုးနေရသည်မှာ စိတ်ထဲ ပိုပီး ဖီလင် လာလှပေသည်
“အားးး မိုးဖင်ကြီးက ပိုကြီးလာလို့ အရင်ထက် ပို အားရတယ်ကွာ အင့်အင့်အင့်“ “အားးး မောင် အားးး ကောင်းတယ် လိုး အားးး ဆောင့်ပေး အားးးး“ “အင်း ကောင်းတယ်မောင် အားးး အ ဆောင့် ပေး မိုး ခံနိုင်တယ် ဆောင့်ဆောင့် “ “အင့်ကွာ အင့်ကွာ ရော့ အင့်အင့် ဖတ်ဖတ် ဖုတ် ဖတ် ဘွတ် “ ကုတင်စောင်း ဖင်ကုန်းထားသည့် အနေအထားမို့ လိုးရသည်မှာ အားရှိလှသည် ။
ငယ်ချစ်တွေ အခုမှ တဖန်ပြန်တွေ့ ပြန်လိုးရသည်မို့ စိတ်တွေ တအားထန်နေလေသည်။ “အင့်ကွာ အင့် အင့် အင့် မိုးဖင်ကို ကြိုက်တယ်ကွာ အင့် အင့် အင့် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “
လီးတံမှာ အဖုတ်ထဲသို့ အဆုံးထိ ၀င်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက် စည်းချက် ကျနေပေသည် “မိုး … ထလိုက် နံရံမှာ လက်ထောက် ဖင်ကော့ပေးးး“ “အင်းးးးး“ မိုးသန္တာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပီး ထမီကို ပါ ချွတ်ချလိုက်ကာ အောက်ခံပင်တီလေးကိုလည်း အောက်ထိ ချွတ်ချလိုက်သည် ။
မောင် အကုန်ချွတ်လိုက်တော့မယ်နော် အကျီတွေ ကြေကုန်လိမ့်မယ် “ “အင်းးး မိုသဘော “အကျီရော ဘော်လီပါ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် “ဟားးး မိုး နို့တွေကလည်း အယ်နေတာပဲကွာ “ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြား လီးကို အမြှောင်းလိုက် ကပ်ပေးလိုက်ရင်း နောက်ကနေ သိုင်းဖက်ကာ နို့အုံကြီးတွေကို အားရပါးရ နယ်ပစ်လိုက်သည် ။
နှစ်ယောက်သား မတ်တပ်ရပ် အနေအထား ဖြင့် မိုးသန္တာကလည်း ဖင်ကြီးကို နောက်ကို ပစ်ကာ ကော့ကော့ပေးနေမိသည် ။ ထို့နောက် အခန်းနံရံ ဆီသွားကာ နံရံမှာ လက်ထောက်လိုက်ရင်း ဖင်ကော့ပေးလိုက်သည်။ “မိုး ပေါင် နဲနဲ ကားလိုက် “ “အင်းးး“ မျိုးမင်းက မိုးသန္တာ နောက်မှ ထိုင်ချလိုက်ကာ ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲကြည့်လိုက်သည် ။
အားးး မိုး စောက်ဖုတ်ကြီးက အရမ်းလှတာပဲကွာ ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ် “ပြောလဲပြော လျာဖြင့် လှမ်းထိုးယက်ပစ်လိုက်သည်။ “အားးးးကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် မောင်ယက်ပေးတာ မခံရတာ ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားပီလဲ အားးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြား အနောက်မှ ဖြဲပီး ယက်နေသည်မို့ မျိုးမင်း နှာခေါင်းက မိုးသန္တာ ဖင်ကြားထဲ နစ်မြုပ်နေသည်။ မျိုးမင်း လျာကို အဖုတ်မှ ဖင်ဝထိ အလျားလိုက် ဆွဲသပ်ပေးလိုက်သည်။“ပလက် ပလက် ပြတ် ပြတ် ပြတ် “ “အားးးး မောင်ရယ် အားးးး“ မိုးသန္တာက အသား သိပ်မဖြူသည်မိုး အဖုတ်က လည်း နဲနဲ တော့ အညိုဘက်သန်းသည်
ဖင်ဝ ကလည်း ညိုတိုတို လေး ။ စအို ခရေသားတလျောက်ကို လျာနဲ့ ရစ်သိုင်း ပတ်ကာ ယက်ပေးလိုက်တော့ ဖင်ကြီး ကော့ကော့တတ်သွားသည်။ သူ့ယောင်္ကျားက အခုလို ဖင်ကို မရိုက်ပေးခဲ့ဖူးဘူး ။ မျိုးမင်း တစ်ယောက်သာ လိုးရင် ဖင်ရိုက်တတ်လေသည် ။ မိုးသန္တာဖင်ကြီးမှာ မျိုးမင်း လက်ဝါး ရိုက်ချက်ကြောင့် တုန်ခါသွားသည် ။
မျိုးမင်း လက်ခလယ်ကို ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ကာ တံတွေး စွပ်လိုက်ပီး မိုးသန္တာ ဖင်ပေါက်ထဲ အဆုံးထိ ထိုးထည့်ပစ်လိုက်သည်။ “အမလေးးးး အားးးး မောင်ရေ အားးးး“
လက်ခလယ်ကို ဖင်ခေါင်းထဲမှာ ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်ရင်း မွှေထိုးပေးကာ အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးလိုက်သည်“အားးး မောင် အားးးးရှီးးး“ မိုးသန္တာ ဒူးတွေ ပါ တဆက်ဆက် တုန်လာလေသည် “အီးးးအားးး“ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားကို တံတွေး ပစ်ခနဲ ထွေးလိုက်တော့ တံတွေးတွေက ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ ဖင်ပေါက်ဝထိ စီးကျလာက ပိုမိုစိုစွတ်လာပီး လက်ခလယ် အသွင်းအထုတ်မြန်ဆန်လာသည်။
အင်းးး မိုး ဒီတခါ ဖင် ချ မယ်နော် မိုးဖင်ကို မချရတာ ကြာလှပီ “ “အင်းးးး မောင့်သဘော မိုး တကိုယ်လုံး မောင့်သဘောပဲ ကြိုက်တာလုပ် အားးး“ မိုးသန္တာ နောက်တည့်တည့် တွင်နေရာယူလိုက်ပီး ဒူးကို အသာကွေးလိုက်ကာ ဖင်ပေါက်ဝ တွင် လီးဒစ်ကို တေ့လိုက်သည် ။ ဒစ်ခေါင်း ကို မြုပ်ရုံ လက်ဖြင့် ထိန်းကာ အသာ ထိုးထည့်လိုက်သည် ။ စိုစွတ်နေသည်မို့ ဒစ်ချောင်းက ပလွတ်ခနဲ့ တိုးဝင်သွားသည် “အ …. “ “ဖြေးဖြေးချင်း အကုန်ထည့်မယ်နော် “ “အင်းးးး အားးးး ဖြေးဖြေး မောင် “ “အင်းးးးးး….အင့် “ စီးတွဲတွဲ တစ်ရစ်ချင်း ထိုးဝင်သွားတဲ့ အရသာ ကို နှစ်ယောက်လုံး ခံစားနေမိသည်။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကြည့်ကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည် “အားးးးအဆုံးထိ ရောက်သွားပီ “အားးး မောင်ရယ် နာလည်းနာတယ် ကြပ်တယ် “ “အင်းးး အထုတ်အသွင်းလုပ်မယ်နော် “ “အင်းး ဖြေးဖြေး မောင် အားးး မောင်လိုးပီးကတည်းက အခုထိ ဖင်မခံဖြစ်ဘူး “ “အင်းးး ဟုတ်လား ယောင်္ကျားက ဖင် မချ ဘူးလားးး“
“ဟင်အင်းးး မချဘူး “ “အင်းးး မိုးကို မောင်နဲ့ မိုးယောင်္ကျား အပြင် အခြားသူ နဲ့ လိုးကြသေးလား “ “အာ မောင်ကလည်း မိုးက မောင်နဲ့ပဲနေဖြစ်ခဲ့တာလေ အခြားလူ နဲ့ မနေပါဘူး ယောင်္ကျားရပီးး ယောင်္ကျားနဲ့ပဲခံတာပေါ့လို့ ဟွန်းးးး“
အ၀င်အထွက် နဲနဲ ကြပ်နေသေးသည်မို့ ဖြေးဖြေးချင်း အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးရင်း နို့တွေကို ညှစ်ပေးနေမိသည် ။ “အင်းးးး အာ့ကြောင့် မိုး ဖင်က ကြပ်နေတာကိုးးး အားးး“ “အင်းးးး အားးး ဖြေးဖြေးမောင် ကွဲ သွားမှာ စိုးတယ် အားးးရှီးးးးး“ “အင်းး ရှီးးးးအား“ “အားးး မောင် ပြန်ထုတ်ပီး အဖုတ်ထဲ ပြန်သွင်းပီး ချောအောင်လုပ်လိုက်ဦး ကြပ်နေတယ် အားးးး“
မျိုးမင်းလည်း လီးတံကို ဖင်ပေါက်ထဲက ပြန်ချွတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲ လေးငါးချက်ဆောင့်ပေးလိုက်တယ် လီးတံမှာ စောက်ရည်များ နဲ့ ချွဲကျိကျိ ဖြစ်လာတော့မှာ ဖင်ဝမှာ တေ့ပီး ပြန်ထိုးထည့်လိုက်တော့ စောစောက ထက်စာလျှင် ပို ချောမွတ်လာတယ် ။
အားးးး မောင် … မိုး ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့ဘူးအားးးးး ကုတင်ပေါ်သွားရအောင်ကွာ မရပ်နိုင်တော့ဘူး“ဟုတ်ပါသည် မိုးသန္တာ ဒူးတွေ တဆက်ဆက် တုန်လာပီး ရပ်နိုင်စွမ်း သိပ်မရှိတော့ ဒူးတွေ ညွှတ်ချင်လာသည် “အင်းးးး လာ မိုးးးးး “ ကုတင်ပေါ်သို့ ဆွဲခေါ်လာပီး မျိုးမင်း ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ မျိုးမင်းဘေးမှာ ဒူးလေး တုတ်ကာ ထိုင်လိုက်ပီး လီးတံကြီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးလိုက်သည် ။ “မောင့်လီးကြီး က အရင်ထက် တော်တော် ကြီးလာတယ်နော် တုတ်လည်း တုတ်လာတယ် “ “မိုးရဲ့ အလှတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ လီးက ပိုတောင်လာပီး ပိုထွားလာတာလေ “ သူမ ဖင်ပေါက်ထဲမှ ထွက်လာပီး အရည်တွေ စိုရွှဲနေသော လီးတံ ကြီးကိုကြည့်ကာ စိတ်တွေ ပိုထလာရင်း လီးတံကြီးကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။ “စောက်ဖုတ်ထဲ ပြောင်းဦးမယ်မောင် အားးး မိုး ပီးချင်လာတယ် အား“လီးတံကို လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း အဖုတ်ထဲ သို့ ပြောင်းထည့်လိုက်ကာ စကောဝိုက်ပုံစံ ဖြင့် လှည့်ကာ ညှောင့်နေမိသည် ။ မျိုးမင်း ကိုယ်ကို မတ်လိုက်ကာ မိုးသန္တာကို တွန်းလိုက်ပီး လေးဘက်ကုန်း အနေ အထား ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည် ။ လီးတံကတော့ ကျွတ်မသွား နောက်ကနေ ခါးကို ကိုင်ပီး အားကုန်ဆောင့်လိုးတော့သည် “အင့်အင့် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “အားးးးးမောင် အားးး ထိတယ် အားးးအမလေးးးး“ “အင့် အင့် အင့် ရော့ကွာ အင့် “ “အားးးး ထွက်တော့မယ် မိုးးးးအားးးး အင့်အင့် အီးးးးး“ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပို မြန်လာပီးနောက် မျိုးမင်း ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ မိုးသန္တာ ဆောက်ဖုတ်ထဲသို လရေတွေ တဖျောဖျော ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ “အ အ အ အ အ အားးးးးးးးထွက်ကုန်ပီ မိုးးးအားးးးး“ “အားးး မိုးလည်း ပီးပီ အားးးး ကောင်းတယ် အားးးးး“ နှစ်ယောက်သား ဘေးသို့ ခွေခွေလေး လဲကျသွားတော့သည် ။ အဖုတ်ထဲမှ လီးတံကလည်း ကျွတ်ထွက်သွားကာ အဖုတ်ထဲမှ လရေတွေ စီးကျလာလေသည်။ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အိပ်ပျော်သွားသည်မသိ မိုးသန္တာ ရေချိုးခန်းမှ ပြန်ထွက်လာတော့မှ မျိုးမင်းလည်း နိုးလာသည် ။ “မိုးးး ရေချိုးလိုက်တာလား “ “ဟုတ်တယ် ညစ်ပတ်နေလို့ “ တဘက်အဖြူရောင်ကြီး ပတ်ထား သည့် မိုးမှာ တမျိုးလှနေသည် ။ ရေစွတ်ထားသည့် တဘက် အသေးတစ်ထည် ဖြင့် မျိုးမင်း လီးတံကို ယုယုယယ သုတ်ပေးနေသည် ။ ဟိုး အရင်တုန်းကတည်းက လိင်ဆက်ဆံပီးတိုင်း မိုးသန္တာက မျိုးမင်း လီး ကို သေချာ သန့်ရှင်းပေးနေကျမို့ မျိုးမင်း အရင်ကအချိန်လေးတွေ ကို တွေးမိရင်း ပြုံးမိလိုက်သည် “မိုးက အရင်တုန်းကလိုပဲနော် မောင့်ကို သန့်ရှင်းပေးတတ်တာလေး သဘောကျတယ် “ ပါးလေးကို သာသာဖွဖွ နမ်းလိုက်သည် “ချစ်တာကိုးးး မောင်ရဲ့ “ “အောက်ထပ်မှာ တစ်ခုခု သွားစားရအောင် မိုး ဆာနေပီမလား “ “ဟုတ် အာ့ ဆို ခန အကျီ ၀တ်လိုက်ဦးမယ် “ “၀တ်မနေပါနဲ့တော့ မောင်လည်း ဒီတိုင်း ဆင်းမယ် လာ “ မိုးသန္တာ လက်ကို ဆွဲကာ အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာကြသည် ။ မျိုးမင်းက ကိုယ်လုံးတီး မိုးသန္တာကတော့ တဘက်လေး ပတ်ထားရင်းပေါ့ ။ နှစ်ယောက်သား ကြည်ကြည်နူးနူး ဖြင့် အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာပီး ထမင်းစားခန်း သို့အရောက် “ဟင်…..သိမ့်….“ မျိုးမင်းရော မိုးသန္တာ ကော တွေ့လိုက်ရသည်က ထမင်းစားခန်း ရေခဲ သေတ္တာ ကို ဖွင့်ကာ ရေဘူးထုတ်ပီး ရေသောက်နေသော ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခု လုံး ဘာအ၀တ်အစားမှ မ၀တ်ထားသော မီမီသိမ့် ကို တွေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် မီမီသိမ့်လည်း အရမ်းအံ့သြသွားသလို လန့်ဖျက်သွားသည် “ဟင် …ကို ….“ သုံးယောက်သား ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားသည် ။ ဟုတ်ပါသည် ။ ဒီနေ့ မနက် မှာ မိုးသန္တာ နဲ့ မျိုးမင်း နဲ့ က အစောပိုင်း ချိန်းဆိုကာ အိမ်အပေါ်ထပ်တွင် အလုပ်ဖြစ်နေကြချိန် ဘယ်သူမှမရှိဘူး အထင်နဲ့ မီမီသိမ့်နဲ့ ၀င်းနိုင်တို့ကလည်း အောက်ထပ်မှာ လိုးပွဲ ကျင်းပ နေကြခြင်းဖြစ်သည် ။ အခန်းတံခါးက လည်း ပွင့်လျှက်မို့ အပြင်က အသံကြားသဖြင့် ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ၀င်းနိုင် ထွက်အကြည့် “ဟင်…မိုးးးး ကိုမျိုးမင်း “ “ဟာ…၀င်းနိုင် “ “အို …..“ လေးယောက်သား အခြေအနေ အရပ်ရပ်က တွေးကြည့်စရာမလို ပြေးကြည့်စရာမလို ရှင်းပြစရာ မလို တော့ သည့် အဖြစ် လေးယောက်စလုံး မျက်နှာတွေက အံ့သြမှုမှ တဆင့် တဖြည်းဖြည်း ပြုံးလာကြသည် … အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေရာမှ မျိုးမင်းက “ကဲ … အားလုံး ဆာနေကြပီမလား မိုးနဲ့သိမ့် တစ်ခုခု စီစဉ်လိုက်တော့ “ မျိုးမင်းက ပြောပီး အခန်းထဲ ၀င်ကာ တဘက် တစ်ထည်ယူပီး ပတ်လိုက်သည် ။ မီမီသိမ့် နဲ့ ၀င်းနိုင်လည်း တဘက်လေးတွေ ယူပတ်လိုက်ပီး မီမီသိမ့်နဲ့ မိုးသန္တာက စားစရာ စီစဉ်ကြတော့သည် ။ လာဗျာ ကိုဝင်းနိုင် ဘီယာလေး ဘာလေး သောက်ရအောင် အခုမှတော့ ဘာမှ အားမနာကြနဲ့တော့ နော့် လေးယောက်လုံး စိတ်တူ ကိုယ်တူပေါ့ဗျာ ..မဟုတ်ဘူးလားးး“ “ဟုတ်ကဲ့ ကိုမျိုးမင်းးး အားမနာတော့ဘူးဗျာ ဟားးဟားးး“ သဘောကျစွာ ရယ်လိုက်ကြပီး ဘီယာပုလင်း ကိုယ်စီ ကိုင်ကာ ဧည့်ခန်း သို့ ထွက်လာလိုက်သည် ။ တီဗီ တွင် အောကား တစ်ကား ဖွင့်လိုက်ပီး နှစ်ယောက်သား ဘီယာပုလင်း တိုက်လိုက်ကြသည် “ဘယ်လိုလဲ ကိုမျိုးမင်း ကျွန်နော့် မိန်းမ အပေးကောင်းရဲ့လား “ “ကောင်းပါ့ ကိုဝင်းနိုင်ရာ ရည်းစားဘ၀တုန်းက လိုးရတာ ထက်တောင်သာသေးတယ် မီမီသိမ့်ကော ဘယ်လိုလဲဗျ “ “အတူတူပဲ ကောင်းတယ်ဗျ အရင်တုန်းကထက် ပိုကိတ်လာတော့ လိုးလို့ အားရတယ်ဗျ ဟားးဟားးးး“ “အေးဗျာ မိန်းမချင်း တရားဝင် လဲလို့ရရင် သိပ်ကောင်းမယ်ဗျာ …“ “ဟုတ်ပါ့ဗျာ ..ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က ရှိသေးတယ်ဗျ အခုလိုပဲ စိတ်တူ ကိုယ်တူ နေကြတာပေါ့ဗျာ ကိုမျိူးမင်းလည်း မိုး ကို ကြိုက်တဲ့ အချိန် ခေါ်ချဗျာ ကျွန်နော်လည်း မီမီသိမ့် ကို ဟဲဟဲ “ “ဒါပေါ့ဗျာ … ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ။ ထိုအချိန်မှာပဲ မီမီသိမ့်နဲ့မိုးသန္တာ ရောက်လာပီး စားစရာတွေချကာ “မိုးတို့လည်း သောက်မယ်နော့် ဖြစ်တယ်မလား မီမီ “ “ဖြစ်တာပေါ့ ဝိုင် သောက်ကြတာပေါ့ “ ထို့နောက် လေးယောက်သား ခွက်တိုက်လိုက်ကြပီး ငယ်ငယ်တုန်းက ရည်းစားဘ၀ ကဲခဲ့တာတွေ စမြုံ့ ပြန်ကြရင်း သောက်ကြ စားကြလေသည် ။စားပီးသောက်ပီး တော့ မျိုးမင်းက “ကဲ အချိန်ရှိတုန်းလေး ငယ်ချစ်တွေ ဆက်ဆွဲကြရအောင်ဟေးးးး“ “ကိုမျိုးမင်း ဒီမှာပဲ ဆွဲဗျာ မိုး ကို လိုးတာကိုကြည့်ချင်တယ်ဗျာ ကျွန်နော်လည်း မီမီသိမ့် နဲ့ ဒီမှာပဲ ဆွဲမယ် “အင်းး ကောင်းတယ် “ “အမလေးးး တို့ကိုများ အရုပ်လေးတွေ အောင့်မေ့နေလားမသိဘူး ဟွန်းးးးး“ မီမီသိမ့်က ၀င်ပြောသည် ။
ကဲ မိုးရေ …မီ့ ယောင်္ကျား ကို သေချာ ပြုစုလိုက်နော် မီမီလည်း မိုးယောင်္ကျား နဲ့ ကဲတော့မယ် “ပြောပြောဆိုဆို မီမီသိမ့်က ပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကို ဖြေချလိုက်ပီး ၀င်းနိုင်ပေါင်ပေါ်မှာ တက်ထိုင်လိုက်သည်။
မိုးသန္တာကလည်း အားကျမခံ မျိုးမင်း ပေါင်ကြားမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ကာ လီးကို ကိုင်ပီး စုပ်ပေးတော့တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ မိုးသန္တာ လီး စုပ်ပေးနေတာကို မီမီသိမ့်နဲ့ ၀င်းနိုင် သေချာစွာ ကြည့်နေသည် ။
မျိုးမင်းက တော့ ဆက်တီပေါ် ထိုင်ရင်း လီးစုပ်ပေးနေတာကို အရသာ ခံနေသည် “မိုး မီမီ ယောင်္ကျားလီး ကောင်းလား “ မီမီသိမ့်က လှမ်းမေးသည် ။ လီးစုပ်နေရင်း မိုး က ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် ။
ထို့နောက် ပါးစပ်ထဲက လီး ကို ချွတ်လိုက်ပီး ဂွင်းထုပေးကာ “အခန်းထဲ သွားကြရအောင် ဒီမှာ ကျဉ်းကျဉ်း ကြပ်ကြပ်နဲ့ “ “အိုခေ လာ သွားကြမယ် ကဲ ဟို လင်မယား အချစ်ဟောင်းတွေ လည်း လိုက်ခဲ့ကြ“ “ဒါပေါ့ လိုက်ခဲ့မှာပေါ့ “ မျိုးမင်းက မိုး ကို ပွေ့ချီလိုက်သလို ၀င်နိုင်ကလည်း မီမီသိမ့်ကို ပွေ့ချီလိုက်ကာ လေးယောက်သား အခန်းထဲ သွားလိုက်ကြသည် ။
အခန်းထဲ ရောက်တော့ မီမီ နဲ့ မိုးက ကုတင်ပေါ်ထိုင် ၀င်းနိုင် နဲ့ မျိုးမင်းက မတ်တပ် ရပ် ပီး လီးစုပ်ခံကြသည် ။ ထို့နောက် တဖန် ၀င်းနိုင်နဲ့ မျိုးမင်းက ပက်လက်လှန်ပီး မိုးနဲ့မီမီ က အပေါ်က တက်ဆောင့် ကာ လိုးကြပြန်သည် ။
ထို့နောက် စုံတွဲ အတည့်ပြန်ချိန်းကာ ကိုယ်မိန်းမ ကိုယ် ပြန်လိုးကြပြန်သည် ။ ထို့နောက် ဖင်ကုန်းခိုင်းပီး ဖင်ပေါက်ကို ချကြပြန်သည် ။ အခုမှ ကိုယ့်မိန်းမ ကို ဖင်ချ ဖူးကြတော့သည် ။ ၀င်းနိုင်နဲ့မျိုးမင်းလည်း သူတို့မိန်းမ တွေ ထန်ကြတာ ကို အခုမှ ပိုသိလာရတယ် ။
၀င်းနိုင်က သူ့မိန်းမ မိုးကို ပိုအံ့သြမိသည် ။ ယခင်က ကျောင်းဆရာမ လေး လို အိနြေ္ဒရရ နဲ့ နေတတ်သေး သူနဲ့ လိုး ရင်တောင် ဒီလောက် ထန်တာ မတွေ့ဖူး အခုတော့ ဖင်ရော အဖုတ်ရော ပါးစပ် ကော အလိုးခံနေပုံမှာ အရမ်း ကို စိတ်ပါလက်ပါ ဖြစ်နေပုံ ကို အံ့သြမိသည် ။
မိုးက ငယ်ချစ်ဦးနဲ့မှ ပိုထန်နေသလိုပဲနော် ကိုမျိုးမင်း ကို တော်တော် ချစ်တယ် ထင်ပါ “ မီမီသိမ့်ကို လိုးနေရင်းမှ လှမ်းပြောလိုက်သည် “ကို့ ကိုလည်း ချစ်ပါတယ် မောင့်ကိုလည်း ချစ်တယ်နော် “ “ကျွန်နော့် မိန်းမ ကလည်း ကိုဝင်းနိုင် နဲ့ မှ ပိုထန် တာထင်တယ်ဗျ “ “ဒါပေါ့ လို့ မီမီ့ ကို ပါကင်ဖောက်ပေးတဲ့ အချစ်ဦးပဲ ထန်တာပေါ့လို့ စွဲလမ်းတာပေါ့ ဟွန်းးးး“ မီမီက ၀င်းနိုင်ပေါ်မှ တက်ဆောင့်နေရင်း လှမ်းပြောသည် ။
နာရီဝက် ကျော်ကျော် လောက် လေးယောက်သား လိုးကြပီး စောက်ဖုတ်တွေထဲ လီးရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်ကြကာ ပီးသွားကြလေတော့တယ် ။ ညနေ လေးနာရီလောက်မှာ ကိုယ်စီ အိမ်ပြန်သွားကြတယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာလဲ ၀င်းနိုင်တို့ အိမ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် မျိုးမင်းတို့ အိမ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်လေးယောက်သား ခနခန လိုးဖြစ်ကြတယ် ။ ၀င်းနိုင်မအားချိန်ဆို မီမီနဲမိုးကို မျိုးမင်းက တူဝမ်းဆွဲသလို မျိုးမင်း မအားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း ၀င်းနိုင်က တူးဝမ်း ဆွဲပေးလေသည် ။
လေးယောက်သားလည်း သဘောတူညီကြပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဘယ်သူမှမသိကြဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူတို့လေးယောက်ကိစ္စကို သိရှိသူတွေက မျိုးမင်း အိမ်မှ အိမ်ဖော်လေး နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထွေးထွေးနဲ့သီတာ ။ အိမ်ဖော်လေးတွေ ဆိုပေမယ့် အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် ဖြူဖြူလှလှလေးနှစ်ယောက် ။
သူတို့ ကိစ္စ ကို သိပီးသွားကြသည်မို့ ထွေးထွေးနဲ့ သီတာကို ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်လာသည် ။ အရွယ်ရောက် အလှသွေးကြွယ် လိင်ကိစ္စတွေကိုလည်း သိနေတဲ့ သူ နှစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း နုတ်ပိတ်ရမလဲ ။
ညဘက် ညဘက်တွေမှာ တစ်ယောက်စက်ပတ်တစ်ယောက် ယက်ကြကာ စိတ်ဖြေနေတတ်ကြပြီဖြစ်သော ထွေးထွေးနဲ့သီတာကို မီမီနဲ့မိုးတို့က ထိန်းသိမ်းမလား ။ ၀င်းနိုင်နဲ့မျိုးမင်းက ထိန်းသိမ်းရမလား ။ ရွာကိုပဲ ပြန်လွှတ်လိုက်ရမလား သို့တည်းမဟုတ်…… စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကပဲ ၀င်ရောက် ထိန်းသိမ်းပေးကြမလား ဆိုတာကတော့…